कोरोना भएकी आमाले जन्मदिने बच्चामा कोरोना सं'क्रम'ण देखिदैन्, तर जो'खि'म उच्च हुन्छ सा'वधा'नी अपनाउनु पर्छ - Filmy News Portal Of Nepal
‘कोरोना भएकी आमाले जन्मदिने बच्चामा कोरोना सं’क्रम’ण देखिदैन्, तर जो’खि’म उच्च हुन्छ सा’वधा’नी अपनाउनु पर्छ’
भरतपुर अस्पताल काठमाडौंको प्रसुतीगृहपछि सबैभन्दा बढी प्रसुती सेवा प्रदान गर्ने सरकारी अस्पताल हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष देशभर करिब चार लाख सुत्केरी हुन्छन्, जसमध्ये वार्षिक साढे १३ हजारले भरतपुर अस्पतालबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा लिएका छन् । चितवन र यस वरपरका जिल्लाबाट समेत प्रसुती गराउन भरतपुर अस्पतालमा ल्याउने गरिन्छ ।
अस्पतालका ६ सय शैयामध्ये १२० शैया स्त्री तथा प्रसुती रोग विभागका लागि छुट्टाइएको छ । भरतपुर अस्पतालमा गत वर्ष १३ हजार ५ सय ४५ महिलाहरुले सुरक्षित मातृत्व सेवा लिएका थिए । प्रा.डा. सुनीलमणि पोखरेलले भरतपुर अस्पतालमा प्रसुती विभागको नेतृत्व लिइरहेका छन् । उनी मातहत १३ चिकित्सक, ५ जना रेजिडेन्ट चिकित्सक झण्डै ११५ जनाले काम गरिरहेका छन् ।
अहिले पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा दैनिक झण्डै एक सयजना बिरामी हेरिरहेको डा. पोखरेल बताउँछन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण गर्भवती एवं सुत्केरीहरुमा जोखिम र चिन्ता बढेको छ । यो अवस्थामा सरकार, स्वास्थ्यसंस्थाहरु र गर्भवती/सुत्केरीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरु के कस्ता हुन सक्छन् भन्नेबारे आम जनचासो बढेको छ ।